Sidee ganacsigaaga ganacsigu uga faa'iideysan karaa abuuraha tooska ah?
Abuurista dib u qaabaynta tayada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ololeyaal kasocda raadinta guuleysiga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ugu yaraan hal mar sameysey dib-u-eegis goobta-ka-dib, waa inaad ogaataa in dib-u-dhiska dib-u-dhiska oo lagu shaqeynayo si loo kordhiyo darajadaada goobta, waa mid dhib badan oo aad u dhib badan. Cusbooneysiinta Google ee ugu dambeysay ayaa waxay muhiim u tahay in la hubiyo tayada ilaha webka ee adiga kugu xiraya iyo ku xirnaanta xiriirka dibadda.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa sida faahfaahin sida shirkaddaada sharciyadu soo saari karaan backlists tayada keenaya natiijooyinka muuqaalka ganacsiga internetka iyada oo aan xitaa isticmaalin abuurka gadaal toos ah.
Dareemida dib u eegista bogga internetka ee sharciga
Xirfadaha intaa ka baxsan ee kuxiran boggagaaga, Google oo kalsooni badan leh waxay u maleyneysaa in goobtaasi tahay, iyo ka dibba, bixiyaa.
Dhamaan website-yada oo qiimo leh u leh dadka isticmaala waxay caadi ahaan ku xiran yihiin tiro badan oo khayraad iyo isticmaalayaal ah isla markaana waxay ku xigaan heer sare SERP. Marka ilaha webka sida Wikipedia, Forbes ama CNN ay ka muuqdaan shanta natiijadood ee ugu horreeya ee su'aashaada, uma baahnid inaad ku qaadato waqti badan raadinta macluumaadka loo baahan yahay. Adiga oo ku dhejinaya websaytkan tayo sare leh oo ku saabsan boosaska TOP, Google wuxuu hagaajiyaa khibradda isticmaalka nidaamka raadinta.
Habka caadiga ah ee helitaanka juice isku xiran waa iyada oo loo marayo farsamaynta macluumaadka xogta iyo tayada waxayna sugaan inay ku faafaan webka. Hase yeeshee, qaar ka mid ah milkiilayaasha bogagga ma sugi karaan illaa inta ay isku xiran yihiin xiriirka iyo waxay u tixraacayaan abuurayaasha kala duwan ee gadaal ujeeda.
Sidee ayuu abuuraha gadaal u shaqeynayaa?
Nidaamka gawaarida gawaarida leh ee dhalinta ah ayaa abuuraya xawaare sare iyo ballanqaadyo xiriiriyeyaashu waxay ka yimaadeen ilo tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, sida aan soo sheegnay kahor intaan helitaanka isku xirnaanta dibadda ee tayada dibadda iyo dadaalka. Taasina waa sababta ay codsigoodu u fiicnaadeen si ay u noqdaan kuwo run ah. Guud ahaan, abuuraha gadaashiisa wuxuu u shaqeeyaa isagoo haysta xog ururin ballaaran oo website-yo ah oo sahlan in lagu dhajiyo. Xaaladaha badankood, saldhigaani wuxuu ka kooban yahay goobo dhowaan soo iibsaday by abuuraha abuuray. Waxaa intaa dheer, bots of this software isku xirka link toos ah abuuraa faallooyin automated on blogs iyo forums iyo sidoo kale ku daabacan posts posts in badan oo website-ka duwan. Sida caadiga ah, abuurayaasha backlink waxay mawduucaan kuugu soo gudbiyaan maqaallo ku yaala goobo badan oo aan u baahnayn soo gudbin.
Lacagta aasaasiga ah ee lagu dhajiyay abuuraha gadaal waa inuu keeno ilo cusub oo cusub oo ku saabsan bogga natiijada raadinta ee ugu horeeya ereyada gaarka ah ee muddo gaaban gudaheeda.
Maxay yihiin dhibaatooyinka laga yaabo inaad la kulanto abuuraha gadaal-qabsiga?
Dhaqanka, jiilka tooska ah ee isku xirnaanta ayaa si weyn uga duwan jihada dabiiciga ah ee dhisida isku xirka waxayna u ekaanaysaa shaki xagga matoorada raadinta.
Haddii milkiilaha ganacsadaha uu go'aansado inuu isticmaalo dib u abuuraha, wuxuu ku kici karaa sumcadiisa ganacsi. Maadaama qalabka noocaas ah uu soo saaro mugga ballaaran ee tayada tayada liidata si kor loogu qaado website-ka iyo in uu helo dib u eegid badan, dadka isticmaala waxay ku xirnaan doonaan waxyaabahan qashinka ah ee shirkaddaada sharci.
Dhibaato kale oo laga yaabo inaad la kulanto isticmaalka farsamooyinka gawaarida gawaarida ah waa ciqaabta Google ee noqonaya mid aad u daran ka dib markii ugu dambeysay Penguin casriga. Ciqaabyadani waxay burburin karaan dhammaan dadaalkaaga SEO waxayna sababi karaan shabakada internetka Source .